Naiditra vonjimaika am-ponja eny Antanimora, ny alakamisy teo, ilay jiolahy isan’ireo atidoha tamin’ilay fampihorohoroana momba ilay raharaha baomba tao amin’ny Jumbo Score Tanjombato. Efa nidoboka eny amin’ny fonjan’i Tsiafahy sy Antanimora ireo voarohirohy niaraka tamin’ity jiolahy ity, saingy ity farany rahateo, mbola notazonina notsaboina teny amin’ny hopitaly. Voalaza fa ny fampanoavana mihitsy no tonga teny amin’ny hopitaly ka naiditra am-ponja avy hatrany izy taorian’ny fanadihadiana azy. Nilaza ho mody marary ity jiolahy ity, araka ny fanazavana voaray.
Olona sivy indray naratra mafy vokatry ny lozam-piarakodia nitranga tao amin’ny fokontany Ankaramena, distrikan’Ambalavao, RN 7 PK 50+150, ny alahady teo. Taksiborosy Sprinter avy any Andonaka, kaominina ambanivohitra Ambinaniroa hihazo an’Ambalavao, ity nivadika ity noho ny fahavakisan’ny kodiarana ankavia. Olona sivy indray naratra mafy ka nentina haingana ao amin’ny CHU Fianarantsoa. Ny zandary avy ao amin’ny “poste avancé” Ankaramena no manao fanadihadiana.
Olona roa indray maty nandritra ny fanafihan-dahalo tao amin’ny fokontany Amparihibe, Tsiroanomandidy, ny asabotsy teo. Dahalo ampolony maro indray nanafika tao an-tanàna. Lasan’izy ireo tamin’izany ny omby ampolony maro. Manao fiambenana ny kizo ny zandary sy ny fokonolona.